hataru/हटारु: माओवादीमा नातेदार नेताहरूको सञ्जाल
सापकोटापुत्र दीपक र किरणपुत्री चेतनाबीच अघिल्लो वर्ष विवाह भएको थियो । । अग्नि सापकोटाका भाइ कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि माओवादीका केन्द्रीय सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको पनि पूरै परिवार पार्टीमा क्रियाशील छ । पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हिसिला यमी भट्टराईपत्नी हुन् । भट्टराई र यमी दुवै संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका सभासद् पनि हुन् । उनीहरूकी एक्ली छोरी मानुषी माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्य छिन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिवसमेत छिन् ।
अर्का सचिव तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकरकी पुत्री प्रभा र प्रचण्डपुत्र प्रकाशबीच विवाह भएको थियो । तर, उनीहरूबीच अहिले सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छ । अध्यक्ष र सचिव अब पूर्वसम्धी मात्रै बनेका छन् । सचिव दिवाकरपत्नी नुवाकोट गणतान्त्रिक मञ्चमा सक्रिय छिन् ।
स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदी पार्टी केन्द्रीय सदस्य छिन् र दुवैजना सभासद्समेत छन् । यशोदा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य नारायणप्रसाद शर्माकी बहिनी हुन् । अर्का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तपत्नी ओनसरी घर्ती केन्द्रीय सदस्य र पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री हुन् । अनन्त र ओनसरी दुवै सभासद् पनि हुन् । स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलकी पत्नी शशि श्रेष्ठ पार्टी केन्द्रीय सदस्य र पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुन् ।
पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल 'आहुति' र केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विशंखे पूर्वपतीपत्नी हुन् । सभासद्समेत रहेका आहुति र विशंखेबीच पारपाचुके भएपछि आहुतिले बुद्धलक्ष्मी महर्जनसँग बिहे गरेका छन् । महर्जन पनि पार्टीमा क्रियाशील छिन् । विशंखे अन्तरिम संसद्मा विधायक थिइन् । पूर्वशान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य विश्वनाथ साहकी पत्नी सीता पोखरेल सभासद् छिन्, उनी अनेमसंघ क्रान्तिकारीकी सहसंयोजक पनि हुन् । पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलकी पत्नी बलावती शर्मा माओवादीको बुद्धिजीवी संगठनमा क्रियाशील छिन् । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायक थिइन् । हितमान शाक्य माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने पत्नी अमृता थापा केन्द्रीय सदस्य छिन् । थापा सभासद्समेत छिन् ।
कुलप्रसाद केसी पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने उनकी पत्नी तारा सभासद् छिन् । पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतकी पत्नी सत्य पहाडी सभासद् छिन् । पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेल र केन्द्रीय सदस्य झक्कु सुवेदीबीच सम्धी नाता छ । गजुरेलकी छोरी ज्योति र सुवेदीका छोराबीच विवाह भएको छ ।
वाइसिएल संयोजक एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य गणेशमान पुन र केन्द्रीय सदस्य कमला रोका दम्पती हुन् । रोका माओवादी संविधानसभा दल सचेतक र भर्खरै नियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत हुन् । केन्द्रीय सदस्यद्वय ईश्वरी दाहाल र महेश्वर दाहाल बाबुछोरा हुन् । केन्द्रीय सदस्य सरला रेग्मीका पति गुणराज लोहनी माओवादीनिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन् । केन्द्रीय सदयद्वय कृष्णध्वज खड्का र रेखा शर्मा पतिपत्नी हुन् ।
पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतकी बहिनीसँग केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिकको विवाह भएको छ । केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री हितबहादुर तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद कमानसिंह लामाबीच पनि सम्धी नाता छ । केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेलका पति प्रज्ज्वल श्रेष्ठ रूपन्देही जिल्लाका नेता हुन् । केन्द्रीय सदस्य गंगा श्रेष्ठकी सासू कल्पना सुवेदी सभासद् छिन् । धादिङकी सभासद् कल्पना धमलाका पति देवेन्द्र पराजुली लमजुङमा माओवादी जिल्ला इन्चार्ज छन् ।
माओवादीमा सात जोडी दम्पती सभासद् छन् । आठ जोडी केन्द्रीय समितिमा छन् । राज्यस्तरका नेताहरूको केन्द्रीय तहसम्मको पारिवारिक सम्बन्धको कुनै लेखाजोखा नै छैन । कतिपय राज्यस्तरका नेताका आफन्तहरू पनि सभासद्, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य र मन्त्रीहरू छन् । तर, केही शीर्ष नेताहरू भने नातेदार सम्बन्धका अपवाद पनि छन् । पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'का कुनै पारिवारिक आफन्त केन्द्रीय तहमा छैनन् । उनी अविवाहित नेता हुन् । महासचिव रामबहादुुर थापा बादल र सचिव सिपी गजुरेलका आफन्तजन पनि केन्द्रीय तहमा छैनन् । स्थायी समिति सदस्यहरू कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नातेदारहरू केन्द्रीय राजनीतिमा छैनन् । महराका छोरा जनसेनाका एक कमान्डर छन् । यी नेताका पत्नीहरू भने राजनीतिमै सक्रिय छन् ।
उपाध्यक्ष प्रकाशसहित केही नेता अविवाहित छन् । नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य, स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, पोलिटब्युरो सदस्य स्वनाम साथी, पम्फा भुसाल अविवाहित छन् । उनीहरूका आफन्त पनि केन्द्रीय तहमा छैनन् । पोलिटब्युरो सदस्यहरू जनार्दन शर्मा र नन्दकिशोर पुनका आफन्तजन पनि केन्द्रीय तहमा छैनन् । चन्द्रप्रकाश खनाल, धर्मेन्द्र बास्तोला, इन्द्रमोहन सिग्देल, हरिभक्त कँडेल, पम्फा भुसाल, गोपाल किराती, राम कार्की, हितराज पाण्डे, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, हेमन्तप्रकाश वली, लोकेन्द्र विष्टमगरका आफन्त पनि पार्टीको केन्द्रीय भूमिकामा छैनन् । त्यसैगरी पोलिटब्युरो सदस्य निनु चापागाईं, भीमप्रसाद गौतमका आफन्तहरू पनि केन्द्रीय तहमा छैनन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई-हिसिला यमी
वर्षमान पुन अनन्त-ओनसरी घर्ती
देव गुरुङ-यशोदा सुवेदी
Dawa तामाङ-कुमारी मोक्तान
हरिबोल गजुरेल-झक्कुप्रसाद सुवेदी
हितबहादुर तामाङ-कमानसिंह लामा
लीलामणि पोखरेल-शशि श्रेष्ठ
कुलप्रसाद केसी-तारा घर्ती
गणेशमान पुन-कमला रोका
कृष्णध्वज खड्का-रेखा शर्मा
ईश्वरी दाहाल-महेश्वर दाहाल
from Naya Patrika/ नेत्र पन्थी
website needs much more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the advice!
Here is my website ... boston carpet cleaning